ZOO, ekweisi ekwe ntị na ntị ntị abanyela | Akụkọ akụrụngwa
Anyị na-ege ntị mgbe niile na wepụtara ọhụrụ na ụwa nke teknụzụ, olee ọgwụgwọ ọ bụrụ na anyị chọrọ ka ị gwa gị. Mgbe onyinye Apple na AirPods gasịrịO doro anya na ndị na-emepụta ụdị ngwa a etinyela batrị na ọtụtụ ebumnuche nke inwe ike imepụta obere ekwe ntị dị mma ma kwụrụ ọtọ ka ọ bụrụ ezie na ha enyeghị gị mma kacha mma, ha na-enye gị nkasi obi kasịnụ enwere ike n'ime ụwa nke na-agba ngwa ngwa na ngwa ngwa.
Cellularline enwetawo na-arụ ọrụ na ya na ụnyaahụ anyị nwetara ozi banyere ZOO, ọhụrụ ekweisi cellularline ọhụrụ ihe ijuanya obere na ime mgbanwe iji ọrụ. Obi abụọ adịghị ya na ezi asọmpi erutela ụdị ụdị ekweisi onwe na-enweghị nnwere onwe na ekweisi ntị na ntị.
zoo ekwukwa Ezi Ikuku stereo (TWS), ohuru ohuru na Bluetooth ọkà okwu technology ọ bụghị naanị nke ahụ, ha na-eme ka ụda dị elu dị mma maka ha n'ezinụlọ mkpọtụ mwepu. You nwere ike ịza ma kwue okwu n'ekwentị site na bọtịnụ azịza dị na capsules na batrị na-adịte aka, nke na-enye ohere oge kachasị arụ ọrụ nke 3 awa maka nke ọ bụla n'ime ntị ntị. Ka ọ dị ugbu a, igbe ya nwere batrị 2.200 mAh, ọ nweghị ihe ọzọ na ihe ọ bụla na-erughị, ngụkọta nke recharges iri na ise, nke ga-eweta ngụkọta nke ihe dịka awa 24 nke playback.
Nke kacha mma, ọnụahịa, Ebumnuche Cellular na-ebupụta ekweisi ndị a na euro 79,95Ọ bụ ezie na ha adịghị ọnụ ala, nke bụ eziokwu bụ na ha adịghị ọnụ ma ọlị ma ọ bụrụ na anyị lelee asọmpi ahụ, ọkachasị Samsung na Apple. Anyị ga-anwa ịnweta otu ule iji gwa gị maka nsonaazụ ikpeazụ nke ekweisi ndị a na-ekwe nkwa nke ukwuu na ụda na imewe, mana karịa ihe niile anyị kwenyere na usoro akụ na ụba.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » OZO, ekwe ntị ekwe ntị na ntị ntị eruola
Biko ị nwere ike ịgwa anyị ebe a ga - azụta ekweisi a na Spain, m ga - achọ ịnye ha maka ndị eze ma enweghị m ike ịhụ ha. Daalụ.
Zaghachi Juan Antonio Castilla Luque
Ọ bụ onye ọrụ gọọmentị, Xiaomi ji ngwaahịa na ọnụahịa na-adọrọ mmasị abịarute Spain